Zimbabwe's Mnangagwa appoints former army boss Chiwenga party VP - The Source
Posted on December 23, 2017 in Zimbabwe
Mohadi (68) joined Zimbabwe’s war of liberation struggle at the age of 27 in 1972, in Zambia. He received military training in Russia and was later detained at Khami Prison, Zimbabwe in 1976 until 1980 when the country attained independence from Britain. He is a former member of PF-ZAPU which joined with Mugabe’s ZANU-PF under a 1987 Unity Accord. He has served in various portfolios under Mugabe and was appointed Defence, Security and War Veterans minister in Mnangagwa’s new government.
Presidential spokesperson George Charamba told The Source that Chiwenga and Mohadi’s appointments to vice presidents of the country could only be made by the Chief Secretary to the Government and Cabinet, Misheck Sibanda, who was out of the country.
ZANU-PF spokesperson, Simon Khaya Moyo could not make the announcement as he had been in the running for the position, Charamba said.
Previous Post: Zim c/bank warns over Bitcoin currency
Next Post: Zimbabwe stocks retreat ahead of holidays